Yintoni umahluko phakathi kwengqolowa Beer kunye nerhasi Beer-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Uthini umahluko phakathi kwebhiya yengqolowa nebhiya yebhali
Ixesha: 2020-06-15 I ngxelo: 515
Ibhiya yengqolowa engaphethwanga (ibhiya yengqolowa ibhiya ene-wort ye-wort ye-11 ukuya kwi-13 ° P) Ngokubanzi umxholo wotywala yi-4.8-5.0% vol. Incasa inzima ngokubanzi, njengekofu ekrakra, kunye I-malt ifakwe, yomelele.
Yibhiya yengqolowa emnyama, inokubizwa ngokuba ibhiya emhlophe (uhlobo lwebhiya emthubi, ngelixa ingqolowa imhlophe igolide kwaye ingqolowa inamandla emdaka), oko ke kugqamisa iindidi zebhiya yengqolowa. Uxinzelelo lwayo lwe-wort lwaluphakathi kwe-11 kunye ne-14. Umxholo wayo wotywala yi-5.0-6.0% yevol (igwele lingenziwa ngaphakathi kwebhotile, ukulungisa imvubelo kungabonwa emazantsi ebhotile, ngombala onamafu). yohlobo lwebhiya inevumba elitsha (inevumba lendalo nelilula lengqolowa, iihops, kunye nethambisi efana necolethi ngaphakathi kwisitatshi sengqolowa), ngamanye amaxesha ikhatshwa livumba elimnandi.
Xa kuziwa kukungcamla, ibhiya yebhali kufanelekile ukuba uyisele. Irhasi inefuthe lerhasi eluncedo, ukutya okubanzi kunye nokunyibilika. Inokukunceda ukwetyisa, ukuzola kwesisu kunye nokuphelisa unxano, kunye nokuphelisa ubushushu.
Kodwa xa kuziwa kwisondlo, ibhiya yengqolowa inesondlo ngakumbi. Ingqolowa ityebile ngesitashi, iiprotheyini ezininzi, amanqatha amancinci, iiminerali ezahlukeneyo kunye neevithamini ze-B. Ibhiya enengqele inexabiso eliphantsi kwaye inencasa kancinci!
Previous: I-Ale ebomvu (irhasi)
Okulandelayo: IINGCEBISO KWISIXHOBO SOKUSETYENZA